Monday March 29, 2010 - 13:16:01 in Xiriirka Kubadda Laliska by Super Admin
Waxaa xeebta AL CURUBA magaalada Muqdisho laga gabagabeeyay horyaalkii 4-aad ee Wiilasha Kubadda Laliska Xeebta [Volleyball Beach] oo socday 18-26/3/2010. Waxaa xeebta AL CURUBA magaalada Muqdisho laga gabagabeeyay horyaalkii 4-aad ee Wiilasha Kubadda Laliska Xeebta [Volleyball Beach] oo socday 18-26/3/2010. Ugu horeyn waxaa xeritaanka horyaalkan ka soo jeediyay ereyo ku aadan abaabulka ay u gashay xiriirka K/Laliska hirgelinta qabashada Horyaalka 6-aad Guddoomiyaha XSKL Prof. Maxamed Cali Caddow isagoo ku dheeraaday in xiriirkooda ku dadaalay iyadoo dalka marxalad xun uu ku jiro qabashada ciyaaraha lagu ciyaarayo xeebta. Guddoomiyaha Xiriirka K/Laliska Prof. Maxamed Cali Caddoow ayaa mahadceliyay ciyaaryahanada iyo madaxda kooxaha iyo shirkadaha ka qeybqaatay horyaalkan isagoo ku amaanay sida ay mar walba ugala shaqeeyaan horumarinta isboortiga gaar ahaan K/Laliska wuxuuna ciyaaryahanadii ka qeybqaatay tartankan ugu mahadceliyay si asluubta leh ee ay tartankan uga qeybqaateen. Sidoo Kale Xeritaanka Horyaalka 4-aad ee wiilasha Kubadda Laliska waxaa ka hadlay mas`uuliyiin uu ka mid yahay Guddoomiye ku xigeenka Guddiga Olambikada Soomaaliyeed Xasan Axmed Cabdi [Xasan Elman] wuxuu ku amaneen xiriirka K/Laliska qaabka wanaagsan ee ay u soo agaasimeen horyaalkan ,wuxuu tilmaameen in uu xiriirka dadaalkiisa ku aadan qabashada tartamada uu noqdo mid joogto ah si loo helo jiilal difaaca ciyaarta K/Laliska Soomaaliyeed. Tartanka ayaa waxaa ka qeybgalayay 10 kooxood oo kala ah Horseed, Gasko, Natiolink, D/hoose, Feero, Heegan, O.F.C, D/Muqdisho, Sunrise iyo Elman.Ciyaarta Final-ka oo ay isaga horyimaadeen Horseed vs. Heegan ayaa waxay guusha si xarago leh ku raacday kooxda Horseed oo 2-0 ku hantay horyaalkii 4-aad.Waxaana ugu danbayntii halkaasi lagu bixiyay bilado, Koobabkii kaalimaha hore iyo shahaadooyin la guddoonsiiyay dadkii gacanta ka gaystay qabsoomidda horyaalkan.Daawashada ciyaartan ayaa waxaa ka soo qeybgalay mas`uuliyiin ka tirsan G.O.S iyo xiriirada hoos yimaada marti sharaf iyo taageerayaal aad u badan oo xiiseeya ciyaarta Kubadda Laliska ee lagu ciyaaro xeebta. Waaxda Warbaahinta ee GOS